विकराल हुँदै ‘हेपाटाइटिस बी’ - samayapost.com
rss २०७७ माघ २१ गते ११:४१
नेपालकै ठूलो जिल्ला डोल्पा ! अधिकांश भूभाग कडा चट्टान र हिमालले ढाकिएको क्षेत्रभित्र पर्दछ । टेलिफोन सेवादेखि सडक यातायातको पहुँचमा उपल्लो डोल्पा अहिलेसम्म पुग्न पुगेको छैन । खासगरी तीनवटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा, टेलिफोन सेवादेखि खाद्यान्नको पीडा यहाँ बस्ती भएदेखि यहाँका मानिसले भोग्दै आएका छन् ।
कोभिड-१९ बिरद्धको खोप लगाउँन जानु अघि र लगाएपछि के गर्ने ? के नगर्ने ? यस्तो छ डाक्टरको सुझाव